I-BOMBARDIER DASH 8
izinyanga 3 2 Sekwedlule amaviki #1512 by ISONTOLE
Isanda kufakwa i-Dash 8 - ngihlaba umxhwele kakhulu.
Kodwa-ke ngilwa ne-FMC maqondana nokwakha indlela. Umzila okhona ufakiwe kunguqulo yokulanda futhi angikwazi ukusicisha ngemuva kokuqalwa kokuma komhlaba wami.
Futhi angikwazi ukwenza isebenze indawo engikhuphuka kuyo kwi-VNAV.
Ngabe ukhona ongasiza.
Isikhathi ukudala page: 0.344 imizuzwana